डाक्टरलाई कुटेर उपचार चाहिँ कहाँ गर्ने ? – Enepal Khabar
डाक्टरलाई कुटेर उपचार चाहिँ कहाँ गर्ने ?
कुनै समय एक चलचित्रकर्मीले भनेको सुनेथे, ुचाहे निर्देशक होस्, निर्माता, क्यामराम्यान तथा कोही पनि चलचित्र सेटको व्यक्ति, उसको पहिलो चाहना भनेको हिरो बन्ने नै हुन्छ, त्यतातिर सफलता नपाएपछि मात्र निर्देशक, निर्माता तथा अन्य विधामा हात हाल्ने हो।ु
हो त्यसैगरी, भाग्यले जतातिर डोर्‍याए पनि धेरै नेपालीको चाहना डाक्टर बन्ने हुन्छ। यौटा बालकलाई पनि भोलि के बन्ने भन्यो भने ुडाक्टर बन्छुु भन्छ। कक्षाको उत्कृस्ट विद्यार्थी, एसएलसीमा राम्रो ल्याउने विद्यार्थी, प्लस टुको उत्कृस्ट विद्यार्थी सबैले आफ्नो सपना डाक्टर बन्ने नै भन्छन्। चर्चित प्रोफेसर, कलाकार, इन्जिनियर आदिले पनि चाहना त डाक्टर बन्ने नै थियो तर सकिएन भन्ने गरेको सुनिन्छ। त्यसैगरी समाजमा पनि आफ्नो सन्तान डाक्टर छन् भनेर नाक ठूलो पार्नेको जमात छ। आफ्नो छोरी(ज्वाइँ, छोरा(बुहारी वा आफन्तमा कोही डाक्टर छन् भनेर गर्व गर्नेहरु तपाईंले प्रसस्त भेट्नु भएकै होला। तर, आजभोलि यो पेशा आफैंमा जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेको छ, भन्नुपर्दा दुःख लागेको छ।
हिजोका दिनमा चिकित्सकीय पेशाको उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा थियो। डाक्टरलाई भगवानकै रुपमा लिने गरिन्थ्यो। यो पेशा व्यावसायिक सुनिश्चितता, सुरक्षित भविष्य र आर्थिक सम्पन्नतासँग जोडिएको थियो। मानव सेवाको पर्यायका रुपमा लिइन्थ्यो। आर्थिक हैसियत भएका सबै अब्बल र लगनशील विद्यार्थीले चिकित्सा पेशा नै अगाल्ने चलन थियो। तर, विगत केही सालयताका घटना हेर्ने हो भने चिकित्सा पेशा नेपालमा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको भान हुन्छ। मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यो पेशा संवेदनशील छ। तर, मेडिकल विज्ञानमा औषधिको क्रिया(प्रतिक्रिया र जटिलता कस्तो हुने, कहिले हुने वा नहुने भनेर कसैले भन्न सक्दैन। यसै क्रममा आफूले सोचेजस्तो सुधार र परिणाम नआउँदा बिरामीका आफन्त तोडफोड र कुटपिटमा उत्रिने घटनाले डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी पीडित छन्। दूरगामी रुपमा हेर्ने हो भने यस्ता विकृतिबाट सर्वसाधारण पनि शिकार हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यी कुराबाट सर्वसाधारण सचेत हुनु आवश्यक छ।
दुई दिनअघि वीरगञ्जमा डाक्टरमाथि कुटपिट भएको ताजा घटना सुन्नमा आयो। एक महिनाअघि पनि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा डाक्टर र नर्समाथि हातपात भएको समाचार सेलाइसकेको छैन फेरि अर्को घटना भइसक्यो। एक वर्षअघिको चरीकोट काण्ड नेपाली चिकित्सा जगतमा डरलाग्दो रुपमा अगाडि आयो। उपचाररत बालकको मृत्यु भएपछि एक हूल मानिसले डाक्टरको लापरबाहीले बच्चाको ज्यान गएको फैसाला गरे। मिडिया र सुरक्षाकर्मीकै उपस्थितिमा डाक्टरहरुलाई मानमर्दन, गालीगलौज र बेइज्जती गर्दै माफी मागेको भिडियो बाहिर आएपछि सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको मन अमिलियो ।
त्यसैगरी, केही समय पहिले कान्ति बाल अस्पतालमा बिरामी बालकका ठूलो बाबुले ड्युटीमा रहेका डाक्टरमाथि हात उठाए। यसैगरी, अन्नपूर्ण अस्पतालमा तोडफोड, नेपालगन्जमा जानकी नर्सिंग होममा हंगामा, जनकपुर अस्पतालको काण्ड आदि बाहिर आइरहे। यति मात्र होइन, केहि दिन अगाडिमात्र अस्पतालका एक कर्मचारीले हेटौंडास्थित उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलाई झापट नै हानेको समेत सुन्नुपर्‍यो।
यस्ता घटना रोकिनेभन्दा पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो समय मनोमोहन अस्पतालमा किड्नी झिकियो भन्ने समाचार पनि निकै चर्चित भयो। त्यहाँ के भएको थियो, चिकित्सकले बिरामी बचाउन कस्तो भूमिका खेकेका थिए भन्ने कुरातिर कसैले खोजीनीति गरेन। घटनालाई सजिलै राजनीतिक रुप समेत दिइयो। माननीयहरुले संसदमै भनिदिएछन्, ुअस्पताल र डाक्टरले बेच्नका लागि किड्नी निकाले।ु मिडियाकर्मी र सभासद्ले त यसरी हलुका रुपमा लिएपछि, सर्वसाधारणले त झन् नकारात्मक रुपमा लिने नै भए। चुनाव खर्च उठाउन किड्नी बेचियोसम्म भनियो।
यस्ता कुरा सुनेर चिकित्सा पेशाको एक सदस्यको नाताले मैले पनि बोल्न आवश्यक ठानें र यस्ता संवेदनशील विषयमा सोचेर(सम्झेर मात्र बोल्नुपर्ने भन्दै फेसबुकमा एउटा पोस्ट सेयर गरें। एक जना भाइले कमेन्टमार्फत ुवाहियात कुरा, स्टोनको अप्रेसनमा किड्नी निकालियो, टाउको दुख्दा पेटको औषधि दिएजस्तो भयो, अझ सुझबुझको कुरा गर्नेरुु भन्दै उल्टै मलाई गाली गरे। अब मैले उनलाई सम्झाउन सक्ने कुरै भएन। कसले सम्झाइदिने सभासद मोहदय, मिडियाकर्मी र ती जस्तै धेरै दाजुभाइलाइ, ुत्यो टाउको दुख्दा पेटको औषधि दिएजस्तो कुरा होइन भनेर।ु स्टोन पनि किड्नीमै थियो र त्यही स्टोन झिक्न अपरेसन गर्ने क्रममा किड्नीबाट धेरै रगत बगेपछि अन्य उपायबाट रक्तस्राव रोक्न नसकिएपछि जीवन रक्षाका लागि पूर्वजानकारी गराएर नै किड्नी झिकिएको थियो।
यो कुरा अस्पताल र चिकित्सकबाट आइसकेको छ। चिकित्सकबाट कमीकमजोरी हुन सक्छ तर सम्बन्धित विज्ञ र निकायले अध्ययन(अनुसन्धान नगरीकन सबै विज्ञ बन्नेर मनलागी बोल्ने हो भने भोलिका दिनमा यसको चर्को मूल्य नेपाली जनताले नै चुकाउनुपर्नेछ। यदि डाक्टरहरुले जोखिमपूर्ण उपचारमा हातै हालेनन् भने के होला अवस्थारु महिना दिनपछि घटनालाई उचालेर राजनीतिकरण गर्नेहरु, अस्पताल तोडफोड गर्नेहरु र डाक्टरमाथि कुटपिटमा उत्रिनेहरुले कहिल्यै यो प्रश्नबारे सोचेका छन्रु भोलि तपाईंको परिवारको सदस्यलाई कुनै जटिल समस्या पर्‍यो भने नेपालमा कसले उपचार गर्नेरु तपाईं सक्नुस् वा नसक्नुस् जटिल समस्याको उपचार गर्न विदेश नै जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्ता भवितव्य विदेश जाँदा नि हुने गर्छ। कुरा यति मात्र हो बाहिर गएर तपाईंहरुले अस्पताल तोडफोड गर्न र डाक्टरलाई कुट्न सक्नु हुन्न। आखिर पीडित हुने त गरिब निमुखा जनता नै हो, बाहिर जानुभन्दा रोगले थलिएर मर्न वाध्य।
यस्ता घटाना र परिस्थितिका कारणहरू बेलैमा पहिचान गर्नु राम्रो हुन्छ। समस्या सबैतर्फ छन्, मेडिकल प्रोफेसनमा, सेवाग्राहीमा, जनमानसमा, राजनीतिमा र यस्तो मौकामा हंगामा गरेर पैसा असुल्ने गिरोहमा।
मेडिकल प्रोफेसनमा अस्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। ुएजेन्टु नै परिचालन गरेर आफ्नो अस्पतालमा बिरामी तान्ने प्रवित्ति नदेखिएको होइन। मेडिकल शिक्षामा भइरहेको अनियमितता र भद्रगोलले पनि नराम्रो छाप छाडेको छ। आवश्यकता र पूर्तिको सन्तुलन मिलाउने नीतिबिना चलेको शिक्षाका कारण बढी जनशक्ति उत्पादन हुनु र बेरोजगारी बढ्नुले नि समस्या पैदा गरेको छ। मेडिकल शिक्षामा कति धेरै बेथिति र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त भर्खरै बिरामी र पूर्वाधार नभएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई जालझेल गरेर दिइएको सम्बन्धनबाट प्रस्टै हुन्छ।
त्यसैगरी, हामी स्वास्थ्यकर्मी पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर आफूले गरेको मात्र ठिक अरुले गरेको गलत भन्दै स्थापित हुने क्रम बढ्दो छ। यस्तो खुट्टा तान्ने प्रवित्तिले धेरै समस्या निम्त्याएको छ। त्यसैले व्यावसायिक मर्यादा, इमान्दारिता र एकताको खाँचो देखिन्छ। विगतमा उजागर भएको ुनक्कली डाक्टर प्रकरणुले पनि डाक्टर र स्वास्थ्य सेवाप्रति जनताको विश्वासनीयता गुम्न पुगेको छ।
यी समस्या दोहोरिरहनुको एउटा कारण चाहिँ डाक्टर र बिरामीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम नहुनु पनि हो। धेरै बिरामीले डाक्टरले समस्या नै नसुनीकन औषधि लेखिदियो, सिस्टरले झर्केर बोल्यो, गाली गर्‍यो भन्ने गुनासो गर्छन्। बिरामीको चाप, सेवा सुविधाबाट असन्तुष्टि जस्ता कारणले यी समस्या आएको होला तर पनि स्वास्थ्यकर्मीले ड्युटीमा रहुन्जेल संवेदनशील बन्नैपर्छ।
अर्कोतर्फ मिडिया छ। अहिले त सामाजिक सञ्जाल पनि उत्तिकै सशक्त छ। समाजमा अविश्वास पैदा हुन्छ कि भनेर मिडिया सचेत हुने कि नहुनेरु समाचार गलत होस् या सही एकचोटि सतहमा आएपछि जनतामा एक किसिमको छाप पर्छ। त्यसैले स्वास्थ्यजस्तो अति नै संवेदनशील विषयसँग सबन्धित समाचार बनाउँदा सत्य, तथ्य नजिक पुग्ने कोसिस गर्नुपर्छ। सतहमा अध्ययन गरेर धारणा बनाउँदा धेरै कुरा फरक पर्छ। त्यसैले परामर्श गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसैमा तपाईं हामी सबैको भलो छ।
अर्को, राजनीतिबाट पनि स्वास्थ्य सेवालाई मुक्त राख्नुपर्छ। बिपीको नाम जोडिएको ठाउँमा केही हुँदा एमाले, माओवादी विरोधमा जाने अनि मनमोहनसँग नाम जोडिएको संस्थामा केही हुँदा कांग्रेस, माओवादी पूर्वाग्रही बन्ने चलन अब बन्द हुनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको राजनीति, आग्रह(पूर्वाग्रह साँध्ने ठाउँ होइन। उपचार सेवा आवेग र भावनामा बगेको हुँदैन, यो त विज्ञान हो। विज्ञानमा पीडा, रोदन र आँसुलाई मापन गरेर निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन, यसले त तथ्यलाई आधार बनाउँछ। यदि कुनै घटनाप्रति सन्देह छ भने त्यसको सत्य(तथ्य छानबिन गर्ने र दोषीलाई दण्ड(सजाय र पीडितलाई न्याय दिने व्यवस्था बनाउनतर्फ पो सबै लाग्नुपर्छ त।
जनताले पनि वास्तविक धरातालमा उभिएर सोच्नुपर्छ। डाक्टरकोमा गएपछि सबै कुरा जादूको भरमा ठिक हुन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन। मेडिकल विज्ञानले पनि मानिसलाई अमर बनाउँछ भन्ने सोच्नु हुँदैन, यसका पनि सीमा हुन्छन्। उपचारमा जोखिम आउनासाथ सबै कुराको दोष डाक्टरलाई दिनु हुँदैन। सकेसम्म डाक्टरले बिरामीको भलो चिताउने हो, यदाकदा प्रतिकूल नतिजा आउनु हामी सबैको दुर्भाग्य हो। यसलाई बार्गेनिङ र आतंकको विषय बनाउनुभन्दा स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ। लापरबाही र खेलवाड नै भएको जस्तो लागेमा पनि कानुनी बाटो समात्नुपर्छ।
(स्वास्थ्य खबर )
१८ भाद्र २०७४, आईतवार २०:३७ मा प्रकाशित